Adeegga Ammaanada Dhulka ee Lahaanshaha Lahaanshaha Real Estate
Maxey Tahay Dhulku?
Aaminaada dhulku waa dukumenti aan abuurnay oo kuu oggolaanaya inaad hantida si gaar ah u haysatid si magacaagu uusan ugu muuqan cinwaanka diiwaannada dadweynaha.
Aynu dhahno inaad gasho shil baabuur. Waxaad leedahay $ 1 mil oo caymis ah. Laakiin waxaad ku dhufatay dillaalihii saamiga ahaa oo waxaad dacwaynaysaa $ 3 milyan. Haddii aad adigu iska leedahay gurigaaga iyo hantidaada maalgashiga magacaaga, qareenka dacwada kugu dacweynaya waxaad si fudud uga heli doontaa gurigaaga iyo wixii kale ee hanti ah ee ku jira diiwaanka dadweynaha. Haddii aad guri leedahay, waxay muujineysaa xoogaa xasillooni dhaqaale qareenka wuxuu aad ugu dhow yahay inuu fayl galiyo dacwadda.
Qareenka iska soo horjeedaa wuxuu si dhakhso leh u keeni karaa shariifka hoygaaga hortiisa, albaabkaagana dheji intaad cashadaada cashada isla markaana gacantaada ku siineyso dacwadaada dariskaaga hortiisa. Si kastaba ha noqotee, markaad haysatid gurigaaga aaminaad dhul, lahaanshahaagu wuu qarsoon yahay. Aaminaadaada dhulka ma aha in lagu diro diiwaanka dadweynaha. Waxay si gaar ah u ilaalisaa lahaanshahaaga. Qofna ma ogaan karo inaad adigu iska leedahay gurigaaga laakiin adiga.
Waa maxay Land Trust?
Aaminaada dhulku waxay leedahay afar qaybood: Number 1 waa degane. Taasi waa adiga sababta oo ah adiga ayaa ah qof qof abuuraya kalsoonida. Lambarka 2 waa wakiilka. Aamintadu waxay xaddidaysaa xakameynta Ammaanadda iyadoo loo eegayo shuruudaha aaminka. Tani waxay noqon kartaa walaasheed ama soddo ama saaxiib, qof aad saaxiibbo tihiin ama xubin qoyska ka mid ah. Si kor loogu qaado asturnaantaada, waxaa ugu wanaagsan in la doorto qof aan magacaaga dambe lahayn. Dhammaan aaminiyeyaasha waxay u baahan yihiin wakiil ammaaneyn sidaan oo kale ah, aaminaadda ayaa xaddidaysa kontrooladooda kala duwan. Lambarka 3 waa ka-faa'iideyste. Taasi waa midka hela dhammaan faa'iidooyinka kalsoonida. Taasi waa Adiga (ama hal qof ama kabadan shaqsiyaad ama shirkado aad magacawday).
Ka-faa'iideystaha ayaa yeelan kara dhammaan xakameynta. Ka-faa'iideysteha ayaa tilmaami kara marka hantida la iibsado ama la iibiyo. Intaas waxaa sii dheer, ka-faa'iideysteha waa kan dib u warshadayn kara guriga ama uga soo ururin kara dakhliga kirada guryaha guryaha. Ugu dambeyntii, lambarka 4 waa udub dhexaadka kalsoonida. Corpus waa raasumaal ama maamule (waxyaabaha qiimaha leh) aaminaada dhexdeeda.
Faa'iidooyinka Ammaanada Dhulka
Waxa ugu weyni waa in dhammaan macaashka canshuurta ee ugu sarreeya ay ahaadaan kuwa xeeladeysan. Iyada oo lagu kalsoonaan karo qaab dhismeed wanaagsan, marka aad iibiso gurigaaga macaashka canshuurtu wuu sii jirayaa. Haddii aad degentahay guriga labo ka mid ah labadii sano ee ugu dambeysay ee 5 ma aha inaad bixiso canshuur macaashka markii aad ku iibinayso ilaa $ 250,000 macaashka qofka keligiis ah ama $ 500,000 ee lammaanaha isqaba, markii la qaabeeyo si sax ah.
Waxa aad ku guuleysatay waa asturnaanta lahaanshaha.
Muxuu Deymuhu sheegi doonaa?
Sharciga Garn - St Germain Depository Institutions Institutions ee 1982 wuxuu si gaar ah ugu oggolaanayaa qof inuu hantidiisa geliyo nooca aaminaadda dhulka ee aan tixraacno iyada oo aan la ixtiraamin qodobka iibka iibka. Taasoo micnaheedu yahay in qofku ku wareejiyo hantida amaahda lagu wareejiyo aaminaadda dhuleed iyada oo aan faragalin laga helin baanka. Tani waa kiiska illaa inta deymuhu sii ahaanaayo kafaa'iideyste, hantidu waxay ka kooban tahay wax ka yar shan guri, deggenaanshaha waa la noqon karaa mana u gudbiyo xuquuqda kale ee deganaanshaha dadka kale.
Sharciga Hay'adaha 1982
TITLE 12> CUTUBKA 13 § 1701j – 3
NUM 1701j – 3. Horey u mamnuucida iibka iibka ah
(d) Ka dhaafida wareejinta cayiman ama
Marka laga hadlayo amaahda hantida dhabta ah
lagu damaanad qaaday deyn guryaha la dagan yahay oo ka kooban shan wax ka yar
qaybaha guryaha, oo ay ku jiraan amaahda saamiyada loo qoondeeyay qaybta guryaha ee a
shirkadaha iskaashatada guryaha, ama guryaha la soo saaray, a
amaahiyuhu uma adeegsan karo ikhtiyaarkiisa iyada oo la raacayo qodobka iibka iibka oo la soo rogay -
(8) wareejinta ah is dhexgalka vivos ee aaminka
taas oo deynsaduhu yahay oo ahaanayaa kafaa'iideyste oo aan xiriir la laheyn a
wareejinta xuquuqda degenaanshaha hantida; ama
(inter vivos trust = Kalsoonida la abuuray inta uu noolyahay degganeha. Dejiyaha ayaa ah midka leh aaminaada la abuuray. Nooca aaminaada Land ee tixraacdu waa kalsoonida inter vivos.)
Xageen Ka Isticmaali Karaa Amaanada Dhulka?
Dadku waxay u adeegsadaan aaminaad dhuleed dhammaan gobollada 50. Qawaaniinta gobolka qaarkood uma baahna tixraac gaar ah oo ku saabsan aaminaada dhulka laakiin dadku waxay ku isticmaalaan dhammaan gobollada. Dadka qaar ayaa khalad sameeya iyagoo odhanaya, “Aaminaada dhulalka laguma xusin shuruucda gobolkeyga, sidaa darteed sharci ma ahan.” Hagaag, xaggee sharciyada oranaya qof xiran karo kabo gaduud ah? Fadhiiso kursi? Cab cabitaan caws laga sameeyay? Ma aha wax kastoo aan sameeyno lagu xardhay buugaagta sharciga. Sharciga guud, sida ka soo horjeedda sharciga qaanuunka, waa sida sharciga iyo dhaqamada kale loo tarjumay oo caado ahaan loo aqbalay sanadihii la soo dhaafay. Ammaano-bixintu waa qayb ka mid ah sharciga guud ee guud ahaan la aqbalay qarniyo ka hor haddii aysan jirin sharciyo sharciga ka soo horjeeda. Ma jiraan wax sharciyo ah, sida qoraalkan ah, oo ka mid ah gobollada 50 ee Mareykanka ee ku hawlan ka soo horjeedka adeegsiga kalsoonida dhulka.
Sheekooyinka Guri Guri
Mid ka mid ah macaamiisheena ayaa deris lugaynayay barxadda hore ee guryahooda. Way jabisay canqowga, waxay ku dhacday xinjir dhiig ah wayna dhimatay. Waxaa lagu dacweeyay waxkasta oo ay haysteen si ka badan waxa caymiskooda dabooli karo. Hadday samayn lahaayeen hal shay oo lahaansho dhul aamin ah oo laga yaabo inaysan dhici lahayn. Maaha in aaminaadu ay meesha ka saarto mas'uuliyadda. Waa taas, habka aan u qaabeyno aaminaadaada dhulka, qofna uma baahna inuu ogaado inuu dan kuu leeyahay hanashada-hanti-lahaanta laakiin Adiga. Markaa, waa wax aan qarsoonayn oo loo yaqaanno cidda qareenku u dacweynayo. Waxay ku qasban yihiin inay lacag badan geliyaan si ay xitaa u ogaadaan inay ku habboon tahay dacwaddaada.
Mid ka mid ah la-hawlgalayaasha xafiiskayaga ayaa iibsaday hantidiisii ​​ugu horreysay ee dakhliga ee gobolka Washington. Waxay ahayd dhisme dabaq ah oo loo yaqaan '6- unit investment house'. Wuxuu shaqaaleeyay qandaraasle si uu u hagaajiyo. Laakiin con-tractor-kii wuxuu isu beddelay nin farshaxan-yaqaan ah. Wuxuu galay dagaal sharci ah oo socday 4 sano oo ku kacayay $ 157,000. Hadduu samayn lahaa hal shay oo kaliya oo hantidiisa lagu leeyahay aaminaad dhuleed, badalkeed magaciisa. taasi waxay u badan tahay inaysan dhici lahayn. Laakiin taa bedelkeeda, dadka ka soo horjeedaa waxay arkeen inuu isagu leeyahay guri iyo hanti maalgashi, sidaa darteed waxay go'aansadeen inay dacweeyaan.
Marka, aaminka dhulkaaga ee lahaanshaha gurigaaga wuxuu ku siin karaa asturnaanta si uu kaaga ilaaliyo inaad lumiso gurigaaga, gaarigaaga, koontada bangigaaga iyo inaad yeelato 25% dakhligaaga mustaqbalka soo xirtay sannadaha 20 ee soo socda. Mar labaad, waa, keli, maahan aaladda ilaalinta hantida. Ujeeddada ayaa ah in laga ilaaliyo dhismahaaga dhismaha indhahaaga indhaha ka qarsanaya. Halkii aad magacaaga ugu hayn lahayd magacaaga maguurtada ah ee dhammaan la arki karo, waxay ku siinaysaa caqabad idinka dhexeysa adiga iyo kuwa aan dantaada ugu wanaagsan ka haysan maskaxda. Markaa, waxay yareyn kartaa fursadda in dacwadda lagaa qaado.
U yeer Shirkadaha Wacan si ay ula hadlaan wakiil. Kadib markaad dalbato, waxaan kuugu soo diri doonaa emailka su'aalahaaga kalsoonida dhulka. Waxaad buuxin doontaa foomka su'aalaha waxaadna ku soo celin doontaa fakis. Dukumentiyadaada waa la diyaarin doonaa. Qoraalka aaminaadda, oo qiyaastii ah bogag 12 ah, ayaa la abuuri doonaa. Tan waxaad ku kaydineysaa faylkaaga faylka guriga ama sanduuqa dhigaalka ee aaminka ah. Qoraalka deeqda ah, ka wareejinta hantidaada ee magacaaga si aad u aaminto sidoo kale waa loo diyaar garoobi doonaa. Dukumintigaan waxaa lagu diiwaangeliyaa xafiiska diiwaangeliyaha degmada ee ku yaal degmada uu gurigu ku yaal. Meelaynta dukumintiga dulsaarka faa iidada leh, kaas oo u gudbinaya danta faa'iidada leh ee hantidaada shirkad, qof ama aaminaad nool ayaa sidoo kale lagu dari doonaa hadaad doorato ikhtiyaarkan bilaashka ah.
Shuraakad Xadidan oo Xadidan
Kalsoonida lagu noolaado iyo dardaaranka